एजेन्सी । संसारमा कहिले काँही निकै आश्चर्य पार्ने घटना हुन्छन्। जब श्रीमानको निधन भयो भनेर एकल जीवन विताइरहेकी महिलाको अगाडी २२ वर्ष पछि श्रीमान जोगी बनेर देखापरेभने के होला ? एक महिलाको जीवनमा यस्तै भएको छ । घटना भारत झारखंडको हो । २२ वर्ष अघि पतिको निधन भयो भनेर विधवा जीवन विताएकी महिलाको अगाडी अचानक श्रीमान जिवीत भएर आए । २२ वर्ष पहिले पति निधन भएको मानेर एकल जीवन विताइरहेकी श्रीमती त्यतीबेला दंग परिन् जब उनका श्रीमान सारंगी बजाउँदै जोगीको भेषमा आइपुगे ।
जोगीको भेषमा आएका उदयलाई देखेपछि उनकी श्रीमतीले उनलाई चिनिन् , र हराएको श्रीमान फेला परेकोमा खुसीले रुन लागिन् । श्रीमानलाई जोगीमो भेष छोडेर घरमा बस्न आग्रह गरिन् । तर उदय साओले बारम्बार आफ्नो पहिचान लुकाए। त्यस समयमा घर र गाउँका धेरै सदस्यहरु त्यहाँ पुगे र सबैले उदयलाई पनि चिने। अन्त्यमा, उदयले आफ्नो वास्तविक पहिचान बताए र श्रीमतीसंग भिख मागे । उनले भने कि जब सम्म मैले मेरो श्रीमतीको हातवाट भिख पाउँदिन मलाई धार्मीक रुपले मुक्ति मिल्दैन । त्यसैले तिमी मलाई भिख दिएर आफ्नो कर्तब्य पुरा गरिदेउ । जोगी को भेष मा बर्षौ पछि, उदय सौ घर आएको जानकारी पाएर धेरै गाउँहरु बाट मानिसहरुको भीड जम्मा भयो।
Previous मलाई दे,खेर थु,क नि,ल्छन भने मेरो के दो,ष
Next ब्वाइफ़्रेण्डले गर्लफ्रेन्डको के ‘चा’ट्छ’ ? हेर्नुस युवतीहरुको जवाफले हसाएरै मुर्छा पर्ने भिडियो